စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ၏ ဒုတိယကာလတိုငါးနှစ်လယ်ယာကဏ္ဍမူဝါဒနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ – Agri Digit News
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ၏ ဒုတိယကာလတိုငါးနှစ်လယ်ယာကဏ္ဍမူဝါဒနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
Posted on Author adminComments Off on စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ၏ ဒုတိယကာလတိုငါးနှစ်လယ်ယာကဏ္ဍမူဝါဒနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁။ မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ၏၇၀%သည် ကျေးလက်ဒေသတွင်နေထိုင်လျက်ရှိကြပြီး အများစု၏ အဓိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်မျိုးသားလုံး၏ ပြည်တွင်း အသားတင် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတန်ဘိုး (GDP) ၏၃၀% ခန့်ကို လယ်ယာကဏ္ဍမှ ရရှိသော်လည်း တောင်သူလယ်သမား အများစု၏ လယ်ယာမြေနှင့် ပတ်သက်သော အကျိုး ခံစားခွင့် အလွန်နည်းပါးလှပြီး ၎င်းတို့၏လူမှုစီးပွားဘဝသည် နိမ့်ကျလျက်ရှိပါသည်။
၂။ ထို့အပြင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၊ သဘာဝဘေးနှင့် အခြားသော ဘေးအန္တရာယ်များ ကျရောက်မှု တို့ကြောင့် တောင်သူလယ်သမား အများစု၏ လူမှုစီးပွား ဘဝကို ပိုမိုထိခိုက် စေပါသည်။ အထူးသဖြင့်၂၀၀၈ခုနှစ်၊ နာဂစ်မုန်တိုင်းနောက်ပိုင်းတွင် နှစ်စဉ်လိုလို ရာသီဥတု ဖောက်ပြန် လာခဲ့ရာ လယ်ယာကဏ္ဍတွင် ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရပါသည်။ သစ်တော ပြုန်းတီးခြင်းကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် မြေဆီလွှာ ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းများ ကို စနစ်တကျ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းခဲ့ခြင်း တို့ကြောင့် မြေဆီလွှာ အရည်အသွေး ကျဆင်းပျက်စီးလာလျက်ရှိပါသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် တောင်သူလယ်သမား အများစုမှာ ဝင်ငွေနိမ့်ကျပြီး အကြွေးသံသရာမှ ရုန်းမထွက်နိုင်သည့်အပြင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ၎င်းတို့ လုပ်ကိုင်သော လယ်ယာမြေများကို လက်လွှတ်ခဲ့ရခြင်းကြောင့် လယ်မဲ့ယာမဲ့များ ဘဝသို့ ရောက်ခဲ့ရပြီး လူမှုစီးပွားဘဝအခြေအနေများကိုပိုမိုထိခိုက်စေခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တောင်သူ လယ်သမား တို့၏ လူမှုစီးပွားဘဝ အခြေအနေ မြင့်မားတိုးတက် လာစေရန်နှင့် လယ်ယာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန် ဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ရေးဆွဲ ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူ ပြုနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။လယ်ယာကဏ္ဍ မူဝါဒအသစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လယ်ယာကဏ္ဍရှိ အခွင့်အလမ်း ကောင်းများ ကို ဖေါ်ထုတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လာနေသော ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဈေးကွက်ရှိ စားသုံးသူများ၏ လိုအပ်ချက်များ ဖြစ်သော အဆင့်အတန်းမြင့် လယ်ယာနှင့် သားငါး ထွက်ကုန် များ ကို အမျိုးအမယ် စုံလင်စွာ ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ယင်းသို့သော မူဝါဒအရ စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးနှင့် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာစေခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းအား မြင့်မားလာခြင်းနှင့် အတူ လုပ်ကွက်ငယ် တောင်သူလယ်သမား၏ ဝင်ငွေပါ တိုးတက် လာစေခြင်း၊ စားသုံးသူများအတွက် ဘေးအန္တရာယ် ကင်း၍ အာဟာရ ပြည့်ဝသော စားနပ်ရိက္ခာများ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ လယ်ယာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်း နှင့်အတူ နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ လယ်ယာထုတ်ကုန်များ ကို ပြည်ပသို့ ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ခြင်း၊ ကျေးလက်ဒေသ လူမှုစီးပွားဘဝ တိုးတက်လာခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရေရှည်တည်တံ့ခြင်း စသော အကျိုးကျေးဇူးများရရှိဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါသည်။
၄။ အားလုံးပါဝင်ပြီး နိုင်ငံတကာနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် ရေရှည်တည်တံ့သော လယ်ယာ ကုန်ထုတ်မှုစနစ် ထွန်းကားစေခြင်းဖြင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံ၍ အာဟာရ ပြည့်ဝစေပြီး ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ မြင့်မားလာစေရန် နှင့် နိုင်ငံစီးပွား ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်။
၅။ ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ နှင့် လယ်ယာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ အား ခေတ်မီ ဆန်းသစ်၍ ရေရှည် တည်တံ့သော ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာများ၊ ပြုပြင်ထုပ်ပိုး နည်းလမ်းများ၊ ထောက်ပံ့ ပို့ဆောင်ရေး နည်းလမ်းများနှင့် ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ ကြီးထွား လာသော ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဈေးကွက် ဝယ်လိုအားနှင့် အညီ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်း၍ အာဟာရ ပြည့်ဝသည့် အမယ်စုံလင်သော စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ တိုးတက်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်။
(က)စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု​၊ အာဟာရပြည့်ဝရေး နှင့် အစားအစာ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းမှု တိုးတက်စေရေး။
(ခ) ပြောင်းလဲလာသော ဈေးကွက်နှင့်အညီ ဒေသအလိုက် ရေမြေ၊ ရာသီဥတု တို့နှင့် ကိုက်ညီ သည့် အမယ်စုံလင်သော လယ်ယာ၊ သား ငါး ထွက်ကုန်များ ထုတ်လုပ်မှု ပုံစံ တိုးမြင့် လာစေရေး။
(ဂ) စျေးကွက် လိုအပ်ချက်နှင့် အညီ လယ်ယာ သား ငါး ထုတ်ကုန်များ ၏ အရည်အသွေးနှင့် စံချိန် စံညွှန်းများ ပြည့်မီစေရေး။
(ဃ) လယ်ယာ ထွက်ကုန် ဈေးကွက်နှင့် ဈေးနှုန်းသတင်း အချက်အလက် ဖြန့်ဝေမှု လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရေး။
(င) တိရစ္ဆာန်နှင့် အပင်ပိုးမွှား ရောဂါဆိုင်ရာ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး၊ စိုက်ပျိုး မွေးမြူ ထုတ်လုပ်မှု အလေ့ အကျင့် ကောင်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် လာစေရေး။
(စ) လယ်ယာကဏ္ဍ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး အတွက် စိုက်ပျိုး မွေးမြူ ထုတ်လုပ်သူ အစုအဖွဲ့များ၊ သမဝါယမ အသင်းများ ပေါ်ထွန်းလာစေရေး။
(ဆ) မျိုးစေ့ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး နှင့် သားငါး မျိုးကောင်း မျိုးသန့် နှင့် မွေးမြူထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးမှု ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေး၊ ဒေသမျိုးရင်းများ ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် မှတ်တမ်းထားရှိရေး။
(ဇ) လယ်ယာ အခြေခံ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစား စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများ၊ ရက်ကန်း လုပ်ငန်းများ၊ ပန်း(၁၀)မျိုးအပါအဝင် ရိုးရာလက်မှု လုပ်ငန်းများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် ကျေးလက်အခြေခံ အဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး။
(ဈ)သုတေသနနှင့် ပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေး။
Prevent the incidence and spread of pests and diseases in crops and livestock by wide spread use of IPM measures ofapreventative nature and through development and adoption of Good Agriculture Practices – GAP, Good Animal Husbandry Practices – GAHP and Good Aquaculture Practices –GaqP.
(က) စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး၊ အာဟာရပြည့်ဝရေးနှင့် အစားအစာ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး တိုးတက် လာစေရန်။
(ခ) တောင်သူလယ်သမားများ၏ အခွင့်အရေး ပြည့်ဝစွာ ရရှိခံစား နိုင်စေရန် နှင့် အကျိုးစီးပွား မြင့်မား လာစေရန်။
(ဂ) လုပ်ကွက်ငယ် တောင်သူလယ်သမားများ၊ တစ်ပိုင် တစ်နိုင် မွေးမြူသူများနှင့် ရေလုပ်သား များ ကို အခြေခံ၍ အစုအဖွဲ့များ၊ သမဝါယမအသင်းများ ဖွဲ့စည်းပြီး အတွေးသစ် အမြင်သစ်များ ဖြင့် စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် လာစေရန်နှင့် ယင်းလုပ်ငန်းများ တွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ပိုမိုမြှင့်တင်ရန်။
(ဃ) လယ်ယာ ကုန်ထုတ်လမ်းများ ၊ ကျေးရွာအခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ မြေယာ အသုံးချမှု အစီအမံများ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် အသေးစား စက်မှုလက်မှု ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ တည်ထောင်ပေးခြင်း တို့ဖြင့် ကျေးလက်ဒေသများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး တောင်သူ လယ်သမားများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ တိုးတက်မြင့် မားလာစေရန်။
(င) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် သမဝါယမ လုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် လာစေရန် လိုအပ်သော နည်းပညာနှင့် ငွေကြေး အရင်းအနှီးများ အတွက် ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ အကူအညီ၊ အထောက်အပံ့နှင့် ချေးငွေများ ရရှိရေးကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးရန်။
(စ) လယ်ယာကဏ္ဍတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးတက်လာစေရေး အားပေး ဆောင်ရွက်ရန်။
(ဆ) ပြည်ပဈေးကွက်ဝင် အရည်အသွေးမြင့် လယ်ယာ၊ သားငါး ထုတ်ကုန်များတိုးမြှင့် ထုတ်လုပ် နိုင်ရေး အားပေးဆောင်ရွက်ရန်။
(ဇ) လယ်ယာ အခြေခံ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ရက်ကန်း လုပ်ငန်းများ၊ ပန်း(၁၀)မျိုးအပါအဝင်ရိုးရာလက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး အားပေးဆောင်ရွက်ရန်။
(ဈ) သမဝါယမလုပ်ငန်းများ နှင့် သမဝါယမ စနစ် ပိုမိုအောင်မြင်စေရေး ဆောင်ရွက်ရန်။
(ည) တန်ဖိုးကွင်းဆက် တစ်ခုလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ထုတ်လုပ်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့် စားသုံးမှု ကဏ္ဍများကို ထိရောက်စွာ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် သွားရန်။
(ဋ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး၊ ရေရှည်တည်တံ့သော လယ်ယာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး နှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ တွင် သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအသီးသီးမှ အစိုးရ အဖွဲ့ အစည်းများ အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း အပါအဝင် သက်ဆိုင်သူများ အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်သွားရန်။
၈။ လယ်ယာကဏ္ဍ မူဝါဒသည် ပြည်သူလူထု အားလုံး စားနပ်ရိက္ခာနှင့် အာဟာရ ဖူလုံမှု ရရှိစေရေး၊ လုပ်ကွက်ငယ် တောင်သူ လယ်သမားများ အနေဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်မှု စွမ်းအား မြင့်မားပြီး ဈေးကွက်၏ လိုအပ်ချက်နှင့် အညီ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အမယ်စုံအောင် ထုတ်လုပ် ပေးနိုင်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေ မြင့်မား လာစေရေး နှင့် ပုဂ္ဂလိက လယ်ယာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ကဏ္ဍ၏ နိုင်ငံတကာ နှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး ပြည်ပပို့ကုန်တိုးမြင့် တင်ပို့နိုင်ရေးတို့ကို ဖြည့်ဆည်း ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
၉။ မူဝါဒများသည် လယ်ယာကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သည့် ထုတ်လုပ်သူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူများ၊ စားသုံးသူများ အားလုံးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည့် ဥပဒေ မူဘောင်ဆိုင်ရာ ဝန်းကျင်ကောင်းများ ဖန်တီးပေးခြင်းနှင့်အတူ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများ ပေါ်ထွန်းရရှိစေရေးဖြည့်ဆည်းပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ ရေ၊ မြေနှင့် သဘာဝ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်များ ကို ဖော်ထုတ်သုံးစွဲရာတွင် အများပါဝင်မှု၊ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းမှု ရှိစေပြီး ထိရောက်စွာ နှင့် ရေရှည် တည်တံ့စွာ စီမံခန့်ခွဲ အသုံးချနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
(င ) သမဝါယမလုပ်ငန်းများနှင့် သမဝါယမ စနစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒ
(ဇ ) ဈေးကွက်၊ တန်ဖိုးမြှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း နှင့် ပြည်ပတင်ပို့ ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒ
(ည) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒ
(၁)စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သော တောင်သူလယ်သမားတိုင်း တည်ဆဲ လယ်ယာမြေ ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် အညီ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အသုံးပြုခွင့်ကို လွှဲပြောင်း၊ ရောင်းချ၊ ပေါင်နှံ၊ ငှားရမ်း၊ လဲလှယ်၊ ပေးကမ်း၊ အမွေဆက်ခံခွင့်များ ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၂) ဥပဒေများနှင့်အညီ ရေချို ရေငန် ငါးဖမ်းဆီး ထုတ်လုပ်မှုများ စနစ်တကျရှိစေရေး ဆောင်ရွက် သွားမည်။
(၃)လယ်ယာ၊ သားငါး ထုတ်ကုန်များ တိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး အတွက် စိုက်ပျိုးမွေးမြူ ရေး အထူးဇုန်များ တည်ထောင် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၄) တောင်သူ လယ်သမားများ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အသုံးပြုခွင့် ရရှိထားသော မြေယာတွင် ၎င်းတို့ အတွက် အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းသော စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ရွေးချယ် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၅)တောင်သူ လယ်သမား အစုအဖွဲ့များ၊ မွေးမြူသူ အစုအဖွဲ့များ၊ ရေရယူ အသုံးချသူ အစုအဖွဲ့များ နှင့် သမဝါယမ အသင်းများ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီး မြေယာများကို စနစ်တကျ ဖော်ထုတ် အသုံးချခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အားပေးကူညီ ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၆)စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် လိုသူများ၊ အထူးသဖြင့် လုပ်ကွက် ငယ်တောင် သူများနှင့် လယ်မဲ့ယာမဲ့ဖြစ်ပြီး အရင်းအနှီးချို့တဲ့သည့် လယ်ယာ လုပ်သား များအတွက် မြေယာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိရန် မြေယာသစ်များ ဖော်ထုတ်ပြီး ကူညီဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၇)လယ်ယာမြေများ ဖော်ထုတ် လုပ်ကိုင်ခြင်းကို အမျိုးသား မြေအသုံးချမှု မူဝါဒနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၁)တည်ဆောက်ပြီး ဆည်များ၊ မြောင်းများနှင့် မြစ်ရေတင် လုပ်ငန်းများတွင် ဆည်ရေပေး စနစ်များ ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ရေသွင်း ရေထုတ် စနစ်များကို ရေအသုံး ပြုသူ တောင်သူ လယ်သမားများ ကိုယ်တိုင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်သော စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ပိုမို ထိရောက်စွာ အကျိုးပြုစေရေး စီမံဆောင်ရွက်မည်။
(၂) ဒေသအလိုက် အကျိုးရှိမည့် ရေရရှိရေး စီမံကိန်းများကို အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် မည်။
(၃)သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရေအရင်းအမြစ် ကို ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲ မြေအောက်ရေ ဖော် ထုတ် သုံးစွဲခြင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး အတွက် ရေရရှိရေး၊ အဆင့်မြင့် ရေသွင်းနည်း စနစ်များ အသုံးပြုနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၄) ရေဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးအတွက် ရေဘေးကာကွယ်ရေးတာများနှင့်ပင်လယ် ရေငန် ဝင်ရောက်သော ဒေသများတွင် ရေငန်တား တာများ တည်ဆောက်ခြင်း ၊ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်း ခြင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းများ တူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းများ အား ဒေသအလိုက် ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၆)ဒေသအလိုက် စိုက်ပျိုးရေကို အကျိုးရှိ ထိရောက်စွာ ရယူသုံးစွဲနိုင်ရန် “တောင်သူများ စိုက်ပျိုးရေ ရယူသုံးစွဲရေး အဖွဲ့” များ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၇)ဒေသရှိရင်းစွဲ ရေအရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍ ကျေးလက် သောက်သုံးရေ ရရှိရေး ဆောင်ရွက် သွားမည်။
(၁)စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် သမဝါယမ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သည့် ငွေကြေးအရင်းအနှီး၊ ချေးငွေ အထောက်အပံ့၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် သွင်းအားစုများ ရရှိစေရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်။
(၂)ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နှင့် မိသားစု ဝင်ငွေတိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြည်သူဗဟိုပြု နည်းလမ်းဖြင့် အရင်းမပျောက် လည်ပတ်ရန်ပုံငွေ၊ အသေးစား ချေးငွေ၊ လူထုသို့ တိုက်ရိုက် ထောက်ပံ့ငွေများ ထူထောင်ဆောင်ရွက်ပေးမည်။
(၃) မြန်မာ့လယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ခေတ်မီတိုး တက် စေခြင်းဖြင့် ရာသီသီးနှံ ချေးငွေများသာမက အခြားလိုအပ်သော နှစ်တို နှစ်ရှည် ချေးငွေများကိုပါ ဖြည့်ဆည်း ပေးခြင်းနှင့် ရေရှည်တွင် ပြည်တွင်းရှိ ရန်ပုံငွေများကို ပြန်လည်စုဆောင်း သုံးစွဲနိုင်စေ ခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်တစ်ခု၏ လုပ်ငန်းများကို အပြည့်အဝ စွမ်းဆောင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်မည်။
(၄)စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများတွင် အရင်းအနှီးများ သာမက နည်းပညာများ ရရှိစေရန်နှင့် နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်သို့ ထိုးဖောက်နိုင်စေရန် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးတက် ရရှိလာ စေရေး ကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၁)မြန်မာ့ရေမြေ သဘာဝနှင့် ကိုက်ညီပြီး အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာများ ပိုမိုသုံးစွဲနိုင်ရေးနှင့် ခေတ်မီစက်မှုလယ်ယာစနစ်ကို အချိတ်အဆက်မိမိ ကူးပြောင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အားပေးကူညီ ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၂) အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များ တိုးတက် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး အတွက် ရိတ်သိမ်း ချိန်လွန် အသုံးပြု စက်ကိရိယာများ၊ တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်သည့် စက်ကိရိယာများ အပါအ၀င် စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် လက်မှုလယ်ယာမှ စက်မှုလယ်ယာစနစ် ဖော်ဆောင်ရေး အားပေး ကူညီ ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၃) လယ်ယာအခြေခံ စက်မှုလုပ်ငန်း(Agro-based Industry) များ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် စက်ရုံများ၊ ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာများ အဆင့် မြှင့်တင်ရန်နှင့် ခေတ်မီ စက်ကိရိယာ များ အသုံးပြု၍ တန်ဖိုးမြင့် ထုတ်ကုန်များ တိုးတက် ထုတ်လုပ်ပြီး ပြည်ပတင်ပို့နိုင်ရေး အားပေး ဆောင်ရွက်မည်။
(၄)နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းမီ မြေသြဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ပေါင်းသတ်ဆေး၊ အခြားစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ဆိုင်ရာ အသုံးအဆောင်များ နှင့် ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးများ၊ ဆေးဝါးများ စနစ်တကျ သုံးစွဲနိုင်ရေး အတွက် လိုအပ်သော ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ညွှန်ကြားချက်များ ပြဌာန်း ပေး ခြင်းနှင့် ပြဌာန်းထား သော ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ညွှန်ကြားချက်များ နှင့် အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်စေရေး ကြီးကြပ်ပေးခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၅)နိုင်ငံတကာ စျေးကွက်နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ရေးနှင့် အစားအစာ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး တို့အတွက် စံချိန်စံညွန်းနှင့် အရည်အသွေး ပြည့်မီသော စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး ထုတ်ကုန်များ ရရှိစေရန် လိုအပ်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများ ထူထောင်ခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၆) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများတွင် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အရည်အသွေး မြင့်မားရေးအတွက် မျိုးကောင်း မျိုးသန့် သီးနှံမျိုးစေ့များ နှင့် သားငါး မျိုးများ ရရှိအသုံးပြုနိုင်ရန် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက် သွားမည်။
(၁) လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အသေးစား အရင်းအနှီးချေးငွေ၊ လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာ နှင့် သွင်းအားစုများ အရစ်ကျ ရောင်းချရေး လုပ်ငန်းများ အပါအဝင် သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ကို ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး အောင် ဆောင်ရွက်မည်။
(၂)သမဝါယမ အသင်း ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ နှင့် အညီ သမဝါယမ အသင်း များဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ထိန်းကျောင်း တည့်မတ်ခြင်းနှင့် သမဝါယမ ပညာပေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်မည်။
(၃)သမဝါယမ အသင်းသား မိသားစုများ၏ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာ ရေးနှင့် လူနေမှု အဆင့်မြှင့်တင်ရေး အတွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်။
(၅)ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ သမဝါယမအသင်း များအား အဆင့်မြှင့် တင်ရေး ဆောင်ရွက်မည်။
(၆)အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ရက်ကန်း လုပ်ငန်းများ နှင့် ပန်း (၁၀)မျိုးအပါအဝင် ရိုးရာ လက်မှု လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်မည်။
(၁)ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက်ကျေးလက် ကုန်ထုတ် လမ်းများ အပါအဝင် ကျေးလက်လမ်း၊ တံတားများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက် သွားမည်။
(၂)ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ၏ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူပြုစေရန် အတွက် မဟာဓာတ်အားလိုင်း ပြင်ပ ကျေးလက် မီးလင်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၃)ကျေးလက်ဒေသတွင် အခြား လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လူထုဗဟိုပြု ချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၁)ကဏ္ဍအလိုက် သုတေသန လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ခေတ်မီ နည်းပညာများ ပြန့်ပွားရေး ကို ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ပူးပေါင်း ပါဝင်လာစေရေး အားပေး ဆောင်ရွက်မည်။
(၂)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ရေလုပ်ငန်းများ တွင် ခေတ်မီ နည်းပညာများ အပြန်အလှန် ဖလှယ် ရရှိနိုင်ရေး အတွက် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၃) မျိုးဗီဇ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ရာသီဥတုနှင့် ပိုးမွှားရောဂါဒဏ် ခံနိုင်ရည် ရှိသည့် သီးနှံ အထွက် ကောင်း မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ငါးသယံဇာတ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ရာသီဥတု နှင့် ရောဂါဒဏ် ခံနိုင်သော သားငါး တိရစ္ဆာန် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း တို့ကို ဆောင် ရွက်သွားမည်။
(၄)မျိုးဗီဇ အရင်းအမြစ်များ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခြင်း ကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများ၊ အဖွဲ့ အစည်းများ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၅)တောင်သူ လယ်သမားများ၊ မွေးမြူသူများ နှင့် ရေလုပ်သားများအား ပညာပေးလုပ်ငန်းများကို အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံး၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက် သွား မည်။
(၆)အမျိုးသားအဆင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး နှင့် ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သုတေသနစနစ် တည်ထောင်ပြီး ကဏ္ဍအလိုက် သုတေသန ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက် သွားမည်။
(၁) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ထုတ်ကုန် ဈေးကွက်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်း ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ ညှိနှိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ ဈေးနှုန်းနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ သတင်း အချက် အလက်များ ဖြန့်ဝေခြင်းတို့တွင် ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၂) စိုက်ပျိုးမွေးမြူသူများ ဝင်ငွေတိုးမြင့်ရေး၊ ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် လေလွင့် ဆုံးရှုံးမှုများ လျော့ပါး စေရေး တို့အတွက် ကုန်ကြမ်းများတင်ပို့မှုမှ တန်ဖိုး မြှင့်ကုန်ချောပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ် တင်ပို့သည့် လုပ်ငန်းများကို အားပေးဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၃) ကုန်သွယ်ဖက် နိုင်ငံ အစိုးရအချင်းချင်း သဘောတူညီမှုများ ရယူခြင်း၊ ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်လက်များ ကောက်ယူ စုဆောင်း ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း၊ လိုအပ်သည့် ထောက်ခံချက်များ အား ခေတ်မီဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာများ အသုံးပြု၍ ထုတ်ပေးခြင်း တို့ကို အားပေးဆောင်ရွက်သွားမည်။
(ဈ) အုပ်ချုပ်မှု၊ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒ
(၁) မူဝါဒများရေးဆွဲခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင် ရွက်ခြင်းကို ပြည်ထောင်စု အဆင့်နှင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အဆင့်ဆင့် တို့တွင်ရှိသော ဌာန အချင်းချင်း သော်လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သော်လည်းကောင်း ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် သွားမည်။
(၂)စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင် အထည်ဖော်ရာတွင် ထိရောက် အောင်မြင်မှုရှိစေရန် လိုအပ်သည့် အဖွဲ့ အစည်းများ အသစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ရှိပြီး အဖွဲ့ အစည်းများ ကို ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် လုပ်ငန်းစွမ်း ဆောင်ရည်များ ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၃) လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ခေတ်မီ အဆင့်မြင့် ပညာရေးနှင့် အသက် မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရေးတို့အပြင် လုပ်ငန်းခွင် အကြိုနှင့် လုပ်ငန်းခွင် သင်တန်းများ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၄) စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ကိုရှေးရှု သည့် ကောင်းမွန်သော စီမံအုပ်ချုပ်မှုယန္တရား တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်စေရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(ည) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာ မူဝါဒ
(၁)သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များ ကြောင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှု လျော့နည်းစေရေး၊ ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျော ညီထွေရှိသည့် စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး စနစ်များ ဆောင်ရွက် သွားနိုင်ရေး အတွက် လိုအပ်သော နည်းပညာရရှိရေး၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရေး၊ ဌာနဆိုင်ရာနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးတို့ကို ပြည်တွင်း ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၂)ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုနှင့် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များ ကြုံတွေ့လာပါက တောင်သူ လယ်သမားများ၊ မွေးမြူသူများ၊ ရေလုပ်သားများ၏ လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ တုံ့ပြန် နိုင်စွမ်းအား ကောင်းလာ စေရေး ကူညီပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်ပေးမည်။
(၃)သဘာဝ ဂေဟစနစ်များကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း၍ စဉ်ဆက်မပြတ် ရေရှည်သုံးစွဲ နိုင်မှု မြှင့်တင်ရေး၊ မြေဆီလွှာဆုံးရှုံးမှု လျော့နည်းစေရေး၊ မြေဆီလွှာ အရည်အသွေး ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာစေရေး နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ဆုံးရှုံးမှု လျော့နည်းစေရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။
To collaborate with internal and external organizations to acquire needed technology, construct basic infrastructures, and uplift the capacity of concerned departments and organizations – aiming at mitigating losses and damages caused by natural disasters; and implementing resilient agriculture, livestock and fishery activities.
(၁)လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရခြင်းအတွက် ဥပဒေ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ နှင့်အညီ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကူညီဆောင် ရွက်သွားမည်။
(၂)မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများကို လယ်ယာမြေသစ်များ၊ မွေးမြူ ရေးဇုန်များအဖြစ် ဖော်ထုတ် လုပ်ကိုင်နိုင်ရေး အားပေး ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရပြီးသော စိုက်ပျိုးမြေများ၊ မွေးမြူရေးဇုန် များကို လက်တွေ့အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ရေး အတွက် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်မည်။
(၃)လယ်ယာမြေများ ကို ခိုင်လုံသော အကြောင်း တစ်မျိုးမျိုးကြောင့် သိမ်း ဆည်းခံရပါက လျော်ကြေး (သို့မဟုတ်) နစ်နာကြေး (သို့မဟုတ်) အစားထိုးမြေယာ ပြန်လည်ရရှိရေးတို့အတွက် ဥပဒေနှင့် အညီ ကူညီဆောင်ရွက်မည်။
(၄)ကျေးလက်ဒေသ တွင် နေထိုင်၍ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လက်ရှိလုပ်ကိုင် နေသော်လည်း အရင်းအနှီး ချို့တဲ့သူ လယ်မဲ့ယာမဲ့များ၊ လယ်ယာမြေ ချို့တဲ့သူ လယ်ယာ လုပ်သားများ အတွက် အလားအလာ ရှိသော ဒေသများတွင် လယ်ယာမြေ သစ်များ ဖော်ထုတ်ပြီး လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိစေရန် ကူညီဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၅)လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့် ရယူထားသော မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများကို သတ်မှတ် ကာလ အတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုပါက တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံတော်မှ ပြန်လည် သိမ်းယူနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၆)လယ်ယာမြေများ ကို ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ လှပ်မြေ အဖြစ် ထားရှိခြင်းကို ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွား မည်။
(၇)လယ်ယာမြေတွင် တောင်သူ လယ်သမားများ အတွက် အကျိုးရှိစေမည့် ရာသီသီးနှံများကို လွတ်လပ်စွာ စိုက်ပျိုးနိုင်ရေး စိစစ်ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၈)မြေကြီးမြေပုံ မှန်ကန်ရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်မည့် အပြင် မြေမျိုး ကြီးများ ခွဲခြားခြင်း၊ မြေအဆင့် အတန်း ခွဲခြားခြင်းတို့ကို လက်ရှိ သမားရိုးကျ မြေပုံစနစ်မှ ဒစ်ဂျစ်တယ်မြေပုံများသို့ ပြောင်းလဲခြင်း နှင့် ခေတ်မီနည်းပညာသစ်များ အသုံးချခြင်းတို့ကို စနစ်တကျ စီမံဆောင် ရွက်မည်။ တိုင်းတာခြင်း မပြုရသေးသော မြေများထဲမှ အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်မည့် မြေများကို တိုင်းတာ မှတ်တမ်းပြုစုရေး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၉)တောင်ပေါ်/ ကုန်းမြင့်ဒေသ များ၌ အလှည့်ကျ ရွှေ့ပြောင်း တောင်ယာ လုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် ရိုးရာ အစဉ်အလာနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု မြေယာ အခွင့်အရေးများ ကို အလေးထားသည့်နည်းတူ ကုန်းမြင့် လယ်ယာမြေများ ဖော်ထုတ်ခြင်း နှင့် တောင်စောင်းဒေသ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် သုံးစွဲခြင်းတို့ကို နည်းပညာပေး ကူညီ ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၁၀)တောင်သူ လယ်သမားအစုအဖွဲ့၊ မွေးမြူသူများအစုအဖွဲ့နှင့် ရေလုပ်သား အစုအဖွဲ့များနှင့် ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများ ကန်ထရိုက် လယ်ယာစနစ်ဖြင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများနှင့် ထုတ်လုပ်သူ အစုအဖွဲ့များကြား မျှတသော အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေမည့် စံလုပ်ငန်းစဉ် သတ်မှတ်ပြဌာန်း နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၁၁)ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့ချရေးအတွက် လုပ်ကွက်ငယ် လယ်သမားများ၏ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ နည်းပညာနှင့် စျေးကွက်ဝင်ရောက်ခွင့် တန်းတူရရှိစေရေး စသည့် လယ်ယာကဏ္ဍ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး လုပ်ငန်းများအား အားပေး ကူညီဆောင်ရွက်မည်။
(၁၂)ရေချိုရေငန် ငါးမွေးမြူဖမ်းဆီးထုတ်လုပ်မှုတွင် ငါးဖမ်းရေယာဉ်၊ ငါးဖမ်း နည်းစနစ်၊ ငါးဖမ်း ကိရိယာ အမျိုးအစားနှင့် ငါးဖမ်းကွက်များကို ငါးလုပ်ငန်း ဥပဒေနှင့်အညီ စီမံကြီးကြပ် ဆောင်ရွက် သွားမည်။
Focus will be made on drawing correct land map, soil classification and soil grading – using digital mapping system rather than traditional mapping system. All land not yet surveyed, but has potential for profitable use, will be surveyed and recorded.
(၁)ရေလေလွင့်မှုနည်းပါးပြီး အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ရေး အတွက် လက်ရှိ ဆည်များ၊ မြစ်ရေတင် လုပ်ငန်းများ၊ မြေအောက်ရေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ ရေပေးဝေမှုစနစ်နှင့် ရေသောက် စနစ်များ ကို ခေတ်မီအောင် ပြုပြင် တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်မည်။
(၂) ကျေးရွာပိုင် ဆည်များ၊ ရေကန်များ၊ ရေသွင်း ရေထုတ် စနစ်များ၊ လယ်သမားတာများ တည်ဆောက်ရေး နှင့် ထိန်းသိမ်းရေးကို ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးမည်။
(၃)လိုအပ်သည့် ဒေသများတွင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရေအရင်းအမြစ် ကို ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြင့် မြေအောက်ရေ တူးဖော်သုံးစွဲနိုင်ရေးနှင့် အစက်ချရေပေးစနစ်၊ ရေဖျန်း စနစ် စသည့် အဆင့်မြင့် ရေသွင်းနည်းစနစ်များ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုနိုင်ရေး ဆောင်ရွက် သွားမည်။
(၄)ရေဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးအတွက် ရေဘေးကာကွယ်ရေး တာများနှင့် ပင်လယ် ရေငန် ဝင်ရောက်သော ဒေသများတွင် ရေငန်တားတာများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းများ တူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းများ အား ရံပုံငွေရရှိမှု ပေါ်မူတည်၍ ဒေသအလိုက် ဦးစားပေး အစီအစဉ်များဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၅) ဒေသရှိရင်းစွဲ အရင်းအမြစ်များနှင့် ဒေသ၏လိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည် ၍ စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းသုံး ရေ၊ သောက်သုံးရေ ဖူလုံစေရေးနှင့် ဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး အတွက် ရေလှောင် တမံနှင့် ဆည်ငယ်၊ ကန်ငယ်များ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ ကို ဆောင်ရွက်မည်။
(၆)ဒေသအလိုက် စိုက်ပျိုးရေကို အကျိုးရှိ ထိရောက်စွာ ရယူသုံးစွဲနိုင်ရန် “တောင်သူများ စိုက်ပျိုးရေ ရယူ သုံးစွဲရေးအဖွဲ့” များဖွဲ့စည်း တည်ထောင်နိုင်ရေး အတွက် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြဌာန်းခြင်းနှင့် ယင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားရေး အတွက် လိုအပ်သောနည်းစနစ်များလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက် သွားမည်။
(၇)ကျေးလက် ဒေသများ တွင် သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေရရှိရေး နည်းပညာနှင့် အသိပညာ ပေးရေး အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၁)စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး နှင့် ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၊ သမဝါယမကဏ္ဍနှင့် ကျေး လက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကဏ္ဍများ တိုးတက်စေရေး အတွက် ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ အကူအညီများ၊ ချေးငွေများ၊ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများ ရရှိရေးနှင့်ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်မည်။
(၂)လယ်ယာ အခြေခံ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစား စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများ၊ အသက် မွေးဝမ်းကျောင်း နှင့် မိသားစုဝင်ငွေတိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နည်းပညာနှင့် အရင်း အနှီးများ ရရှိစေရေးကူညီဆောင်ရွက်မည်။
(၃) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး နှင့် ရေလုပ်ငန်းသုံး စက်ကိရိယာများအား လွယ်ကူစွာ ရယူသုံးစွဲနိုင်ရန် ဆက်စပ်ဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစုအဖွဲ့များ၊ ဘဏ်များ၊ သမဝါယမအသင်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ နှင့် ချိတ်ဆက်၍ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အပါအဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုချေးငွေများကိုရယူ၍ ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရေး ကူညီဆောင်ရွက် သွားမည်။
(၄) နှစ်ရှည်သီးနှံ အပါအဝင် သီးနှံအားလုံး အတွက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု စရိတ် နှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစရိတ်ကို အတော်အသင့် ကာမိစေသည့် စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး စရိတ် ချေးငွေများ ရရှိရေးနှင့် လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာများ ဝယ်ယူနိုင်ရေး အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်များနှင့် ကုန်သွယ်စီးပွား ဘဏ်များ မှ ငွေချေးမှု စနစ်များ ဖွံ့ဖြိုးစေရေး အားပေး ကူညီ ဆောင်ရွက်မည်။
(၅)သီးနှံများ အာမခံစနစ်နှင့် လယ်ယာကဏ္ဍ ချေးငွေများနှင့် သီးနှံသိုလှောင်မှုအပေါ် အာမခံ ပေးမှု စနစ်ပေါ်ထွန်းရေးကို သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည်။
(၆) ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နှင့် မိသားစုဝင်ငွေ တိုးပွားရေး၊ လူမှုရေး ဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြည်သူ ဗဟိုပြု နည်းလမ်း ဖြင့် အရင်းမပျောက် လည်ပတ်ရန်ပုံငွေ၊ အသေးစားချေးငွေ၊ လူထုသို့တိုက်ရိုက် ထောက်ပံ့ငွေ များ ရရှိရေး ကူညီဆောင်ရွက်မည်။
(၁) စက်မှုလယ်ယာ လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ခေတ်မီအဆင့်မြင့် ပညာရေးနှင့် အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်း ပညာရေး တို့တွင် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရသင်တန်းများ တည်ထောင် ဖွင့်လှစ် သင်ကြားနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၂) စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး နှင့် ရေလုပ်ငန်းသုံး စက်နှင့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ စံချိန်စံညွှန်းများ သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အားပေးဆောင်ရွက်မည်။
(၃)စိုက်ပျိုး မွေးမြူ​ရေး လုပ်ငန်းများ တွင် အထူးသဖြင့် လုပ်ကွက်ငယ် တောင်သူ လယ်သမားများ နှင့် တပိုင်တနိုင် မွေးမြူသူများအား ဦးစားပေး၍ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းသုံး အသေးစားစက် နှင့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် ထုတ်လုပ် သုံးစွဲနိုင်ရေး ပံ့ပိုးရန်နှင့် ခေတ်မီ စက်မှုလယ်ယာ စနစ် သို့ အဆင့်ဆင့် တိုးတက် ဖြစ်ပေါ် လာစေရန် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍကို အားပေးကူညီမည်။
(၄)တောင်သူလယ်သမားများ နှင့် မွေးမြူသူများ လိုအပ်သည့် မျိုး၊ မြေသြဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ပေါင်းသတ်ဆေး၊ မွေးမြူရေး အစာ၊ ဆေးဝါးများနှင့် သွင်းအားစုများကို မှန်ကန်သော အရည် အသွေး၊ ဈေးနှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူရရှိရေး ပေါင်းစပ် ကူညီပေးမည်။
(၅)မြေသြဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ပေါင်းသတ်ဆေး၊ မျိုးစေ့၊ မျိုးသားပေါက်၊ မွေးမြူရေး အစားအစာနှင့် ဆေးဝါးများနှင့် သွင်းအားစုများကို အတုအပမရှိရေး၊ စံချိန်စံညွှန်း ကိုက်ညီရေး၊ တည်ဆဲ ဥပဒေများ နှင့် အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရေး၊ မှန်ကန်စွာ ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ရေးတို့အတွက် ပညာပေးခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ သတိပေးခြင်း၊ အရေးယူခြင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာန အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပူးပေါင်းကြပ်မတ် ဆောင်ရွက် သွားမည်။
(၇)ရေ မြေ ဒေသ သဘာဝနှင့် ကိုက်ညီသော မျိုးကောင်း မျိုးသန့်များ နှင့် နည်း ပညာများကို တောင်သူ လယ်သမားများ အား ဖြန့်ဖြူး ပေးနိုင်ရန် မျိုးစေ့ ထုတ်စိုက်ကွင်းများ၊ မျိုးသန့်ဇုန်များ၊ တောင်သူပညာပေး စိုက်ကွင်းများ၊ မွေးမြူရေးဇုန်များ၊ ငါးလုပ်ငန်းစခန်းများကို အစိုးရ အဖွဲ့ အစည်းများ နှင့် ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် တိုးချဲ့ လုပ်ဆောင် သွားမည်။
To expand seed production farms and quality seed zones, on-farm demonstration plot for farmers, livestock zones and fishery zones in collaboration between the government agencies and private organizations – aiming to sufficiently supply locally adaptable seeds and disseminate proven technologies.
(၁)သမဝါယမ လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် အောင်မြင်ရေးအတွက် သမဝါယမ သဘောတရား၊ ကျင့်ဝတ်၊ အနှစ်သာရနှင့် သမဝါယမ အခြေခံမူများနှင့်အညီ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးမည်။
(၂)သမဝါယမ အသင်းသစ်များ အား သမဝါယမ အသင်းဥပဒေ၊ နည်း ဥပဒေများနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်း မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းထားရှိသည့် သမဝါယမအသင်း များအားလည်း ကျစ်လစ် ခိုင်မာစွာ ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် လာစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးမည်။
(၃)ကျေးလက်နေ ပြည်သူများနှင့် မြို့ပြနေ အခြေခံလူတန်းစားများ၏ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် အသေးစား အရင်းအနှီး ချေးငွေ အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးမည်။
(၄)တောင်သူ လယ်သမားများ သို့ လယ်ယာသုံး၊ ရေလုပ်ငန်းသုံး စသည့် စက်ကိရိယာများနှင့် သွင်းအားစုများ အား အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးမည်။
(၅)စက်မှုလယ်ယာ စနစ်သို့ ကူးပြောင်းနိုင်ရေး အတွက် မြေယာပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ဆက်သွယ်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်၍ လိုအပ်သည်များ ကူညီပေးခြင်း၊ ငွေကြေး ပံ့ပိုးပေးခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးမည်။
(၆)သမဝါယမ အသင်းများ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ ကုန်သွယ်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း တို့ကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်သမဝါယမ အသင်းများ အား စွမ်းဆောင်မှု အဆင့်မြှင့်တင် ပေးမည်။
(၇)သမဝါယမ အသင်းများ အား သမဝါယမအသင်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများဖြင့် ထိန်းကျောင်း တည့်မတ်ပေးခြင်း၊ သမဝါယမကျင့်ဝတ်၊ အနှစ်သာရနှင့် အခြေခံမူတို့ကို သိရှိနားလည်စေရန် ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများ နှင့် သမဝါယမ အသင်း အဆင့်ဆင့်ရှိ အမှုဆောင်များ၊ ဝန်ထမ်းများ အတွက် လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်မည်။
(၈)သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လိုအပ်သော အရင်း အနှီး ငွေကြေးများ အား နိုင်ငံတကာမှ အကူအညီ၊ အထောက်အပံ့ နှင့် ချေးငွေများ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည်။
(၉)သမဝါယမ အသင်းသား မိသားစုများ ၏ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူနေမှု အဆင့်မြှင့်တင်ရေး အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်။
(၁၀)အသေးစား စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းများ၊ ရက်ကန်း လုပ်ငန်းများ နှင့် ပန်း (၁၀)မျိုးအပါအဝင် ရိုးရာ လက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ငွေကြေး၊ နည်းပညာ နှင့် စျေးကွက် ရရှိရေး ကူညီဆောင်ရွက် ပေးမည်။
(၁) ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာများအားလုံး ၌ ရာသီမရွေးဆက်သွယ် သွားလာနိုင်မည့် အဓိက လမ်းမကြီး အနည်းဆုံး တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရေးနှင့် ကျေးလက် ကုန်ထုတ်လမ်း၊ တံတားများ ဖွံ့ဖြိုးရေး မဟာဗျူဟာ ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၂) အမျိုးသား လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရရှိရေး စီမံချက်နှင့်အညီ မဟာဓါတ်အား လိုင်းပြင်ပ ကျေးလက် မီးလင်းရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သွား မည်။
(၃)ကျေးလက် မီးလင်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၄) ကျေးလက် မီးလင်းရေး ကဏ္ဍတွင် အသေးစား ဓာတ်အားလိုင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ ရေးဆွဲပြဌာန်းသွားမည်။
(၅) အရေးပေါ် အခြေအနေနှင့် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကျရောက်မှုကြောင့် အိုးအိမ်ပျက်ဆီး ဆုံးရှုံးသွားသော ကျေးလက်နေပြည်သူများအတွက် ကျေးလက်အိမ်ရာများ၊ ကျေးလက် အိမ်သာ များ ဆောက်လုပ်သွားမည်။
(၆) ကျေးလက်ဒေသ၌ အခြား လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အုံများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် လူထုဗဟိုပြု ချဉ်းကပ်မှု နည်းလမ်းဖြင့် ကူညီ ပံ့ပိုး ဆောင်ရွက် သွားမည်။
(ဆ) သုတေသန၊ ဖွံဖြိုးမှုနှင့် နည်းပညာ ဖြန့် ဖြူးခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်
(၁) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံအဆောက် အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းများ အဆင့်မြှင့်တင် တိုးချဲ့ တည်ထောင်ပြီး ခေတ်မီ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး ကိရိယာ များ တိုးချဲ့တပ်ဆင် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၂) သုတေသန လုပ်ငန်းများ၊ နည်းပညာနှင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် လာစေရေး အတွက် ဘာသာရပ်အလိုက် ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ လေ့ကျင့် မွေးထုတ် ပေးမည့် ရေတို၊ ရေရှည် အစီအမံများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၃) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ပညာပေး လုပ်ငန်းများတွင် ခေတ်မီ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာများ အသုံးပြုခြင်း နှင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ပညာပေး နည်းစနစ်အသစ်များ တိုးမြှင့် သုံးစွဲနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၄)ရေ၊ မြေသယံဇာတများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကို ထိန်းသိမ်း နိုင်ရန်အတွက် စံချိန်စံညွှန်း စစ်ဆေးပြီးသည့် ပိုးသတ်ဆေး၊ ပေါင်းသတ် ဆေးများ၊ မွေးမြူရေးဆေးဝါး ပစ္စည်းများ နှင့် မြေသြဇာများကိုသာ သုံးစွဲရေးနှင့် စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး အလေ့အကျင့် ကောင်းများ လိုက်နာ ကျင့်သုံးနိုင်စေရန် တောင်သူ လယ်သမား ပညာပေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၅) ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိမည့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် မြေဆီလွှာနှင့် စိုက်ပျိုးရေ ထိရောက်အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ရေးဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၆)စျေးကွက် လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီပြီး ရေ၊ မြေ၊ ဒေသအခြေအနေ အလိုက် သင့်တော် ဖြစ်ထွန်းမှု ရှိသည့် အရည်အသွေးကောင်း၊ အထွက် နှုန်းကောင်း သီးနှံမျိုးများ မွေးမြူ ထုတ်လုပ်ခြင်း နှင့် ရာသီဥတုနှင့် ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်သော သီးနှံမျိုးများ၊ သားငါးတိရစ္ဆာန် မျိုးကောင်း မျိုးသန့်များ သုတေသနပြု ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၇) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်း ထွက်ကုန်များ ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှု လျော့နည်းစေရန်နှင့် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်စေရေး အတွက် လက်တွေ့ အသုံးချ နိုင်မည့် ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းပညာ၊ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် နည်းပညာများကို သုတေသနပြု ဖော်ထုတ်သွားမည်။
(၈) အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ၊ အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ မဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများ အားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည့် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ သုတေသန အဖွဲ့အစည်းနှင့် အမျိုးသား အဆင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ သုတေသနနှင့် တိုးချဲ့ ပညာပေးရေး စနစ်များ ထူထောင်၍ သုတေသန လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက် သွားမည်။
(၉) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းသုံး စက်နှင့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ တီထွင် အသုံးပြုမှု ဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် ပညာပေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၁)စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး နှင့် ရေလုပ်ငန်းထွက်ကုန်များကို အခြေခံပြီး တန်ဖိုး မြင့် ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေး နှင့် ထုတ်ကုန် ပစ္စည်း များ နိုင်ငံတကာစျေးကွက်တွင် ယှဉ်ပြိုင် နိုင်စွမ်း ရှိစေရေး ကို အားပေး ကူညီဆောင်ရွက်မည်။
(၂)တန်ဖိုးမြင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ပေါ်ပေါက် လာစေရန် နည်းပညာ ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် လိုအပ်သော အရင်းအနှီးများ ရရှိရေးတို့ကို ကူညီဆောင် ရွက်မည်။
(၃) ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုန်သွယ်မှု၊ ဈေးကွက် ဝယ်လိုအားနှင့် ရောင်းလိုအား၊ ဈေးနှုန်းနှင့် အခြားစျေးကွက် သတင်း အချက်အလက်များကို လုပ်ငန်း တွင် ပါ၀င် ဆောင်ရွက် နေသူများ အားလုံး ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် အချိန်မီ သိရှိနိုင်စေရန် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်။
(၄) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ရေထွက်ပစ္စည်း၊ ပြည်ပပို့ကုန်ပစ္စည်းများ အတွက် အစားအစာ သန့်ရှင်း စင်ကြယ်ခြင်း၊ ပိုးမွှားရောဂါ သန့်စင်စေခြင်း၊ ပိုးမွှား ရောဂါများ ပြန့်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ် ခြင်း၊ အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲခြင်း (Sanitary, Phytosanitary, Quaratine, Quality Inspection and Supervision) နှင့် ယင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုအပ်သည့် သတင်းထုတ်ပြန် ကြေငြာခြင်း လုပ်ငန်းများအား ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ သိရှိနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများ၏ ပိုးမွှားရောဂါများဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ နှင့် အညီ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးထုတ်ကုန်များ တင်ပို့နိုင်ရေးကို ကူညီ ဆောင်ရွက် သွားမည်။
(၅) မျိုးကောင်းမျိုးသန့် တိရစ္ဆာန်နှင့် အရည်အသွေးမီသော တိရစ္ဆာန်ထွက် ပစ္စည်းများ တိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး အတွက် မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် တိရစ္ဆာန် အာဟာရ ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတို့ကို ခေတ်မီ နည်းပညာများဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၆)လယ်ယာကဏ္ဍ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးကွင်းဆက်တလျောက် အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်း ရှင်များ၊ ထုတ်လုပ်သူများ အားလုံး ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုပုံစံ ဖြင့် အကျိုးအမြတ် မျှတစွာ ခွဲဝေ ရရှိရေး ဆောင်ရွက် သွားမည်။
(၇) တန်ဖိုးကွင်းဆက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် စတင်စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ် သည်မှ စားသုံးသူ လက်ဝယ် ရောက်ရှိသည်ထိ ကွင်းဆက်တလျောက် အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ထုတ်လုပ်သူများ အားလုံး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ရပ် ဖန်တီး နိုင်ရေး နှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးတက်​ စေရေးကို ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(၈)စျေးကွက် ခိုင်မာရေး၊ စျေးနှုန်း အာမခံချက်ရရှိရေး နှင့် ဈေးကွက်တွင် ကြားခံ ကုန်ကျစရိတ်များ လျော့နည်းစေရေး တို့အတွက် လက်ကားစျေး နှင့် ကုန်စည်ဒိုင်များ များဖွံ့ဖြိုးရေး ကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်။
(၉)စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး နှင့် ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ ဈေးကွက်ရရှိရေး အတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ၌ ပြုလုပ်သည့် ကုန်စည်ပြပွဲများ၊ စီးပွားရေး စကားဝိုင်း တွေ့ဆုံပွဲများတွင် ပါဝင်ပြသ၊ ဆွေးနွေး နိုင်ရေး ကူညီဆောင် ရွက်မည်။
(၁၀)စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းများတွင် ခေတ်မီနည်းပညာများ အပြန်အလှန် ဖလှယ် ရရှိနိုင်ရေး အတွက် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်။
ဈေးကောင်းရသည့် တန်ဖိုးမြင့် သီးနှံများကို အရည်အသွေးကောင်း ထုတ်လုပ် နိုင်မှသာ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်သူများအတွက် အကျိုးအမြတ် ပိုမိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သီးနှံပုံစံအလိုက် ရင်းနှီး မြုပ်နှံမှုနှင့် အကျိုးအမြတ်၊ ဈေးကွက်သေချာမှု အခြေအနေများ ကို တောင်သူသိရှိ ဆောင်ရွက် နိုင်စေရန် ဆွေးနွေးအကြံပြုပေးခြင်း၊ အများဆုံး အကျိုးအမြတ် ရရှိမည့် သီးနှံပုံစံ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် လိုအပ်သည့် နည်းပညာနှင့် အကူအညီ များ ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ပြည် ၊ အောင်လံ ဝန်းကျင်တွင် ဒေသအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီ ဆီလျော်မှု ရှိသည့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့များ နှင့် သမဝါယမများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ထိရောက်သည့် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ် များ ရှိ Read More…